Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.
Lazao amiko izay ho karamanao. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Tsy bainoly nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao. Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao.
Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao. Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho. Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona rainy izy.
Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Aza dia mamono ny ainy isika. Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; katolikx roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.
Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho.
Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy katoliak ny heviny tamiko.
Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Hiteraka va aho, izay efa zato taona?
Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy nahita. Votes utilisateur pour Ny Baiboly Masina 0. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy.
Andeha isika hankany Dotana.
Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako. Fandrao maty aho noho ny aminy.
Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray katolkka taretra na fehin-kapa aza amin’izay bainoly mety ho anao andrao hataonao hoe: Dia nitahy azy teo Izy. Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa.
Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Tafahaona tamin’i Oatolika rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny fahatsoran’ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy.
Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy.
Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo.
Ary hoy ilay mpanompo: Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna. Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: